को’रोना संक्रमित प्रेम विकलाई गाउँलेले ल,खे,टे, विचरा गाउँलेले ल,’ख,टेपछि दुई दिनसम्म उनी भोकभोकै बसे – UPDATE LINK
को’रोना संक्रमित प्रेम विकलाई गाउँलेले ल,खे,टे, विचरा गाउँलेले ल,’ख,टेपछि दुई दिनसम्म उनी भोकभोकै बसे
Posted By: UL
को’रोना संक्रमित तल्कोट गाउँपालिका–५ ललितपुरका ७० वर्षीय प्रेम विकलाई गाउँलेले ल, खे, टेका छन् ।स्वास्थ्यमा स’मस्या आएपछि ८ जेठमा उनले जिल्ला अस्पताल बझाङमा पिसिआर परीक्षण गराएका थिए ।
परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पजिटिभ आएपछि उनी दुई दिन जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा बसे । त्यसपछि होम आइसोलेसनमा बस्ने भन्दै घर हिँडेका विक छिमेकी गाउँपालिका मष्टामा आफन्तको घर जान भनेर हिँडे । मष्टा गाउँपालिका–६ स्थित आफन्तको घर पुगेका विकलाई को’रोना लागेको थाहा पाएपछि गाउँलेले ले, x खे, x टेका हुन् ।
गाउँलेले ल, xz ’ख, x टेपछि दुई दिनसम्म उनले भोकभोकै बसे । विकको परिवारमा कोही पनि छैनन् । आफन्तको श’रणमा गएका विक गाउँले नै ल, x खे, x टेपछि साह्रै स’मस्यामा परेका छन् । स्थानीयले नै तल्कोट गाउँपालिका घर भएका विक मष्टा गाउँपालिकामा दुई दिनसम्म खाना नपाएर छ’टपटाएको खबर तल्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर विष्टलाई जानकारी दिएका थिए ।
सो खबर पाएलगत्तै विष्टले तत्काल तल्कोट गाउँपालिका स्वास्थ्य चौ’की इ’न्चार्ज राजु विकको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली ख’टाई वृद्धको उद्घार गरेका छन् । हाल उनी तल्कोट गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा बसेका छन् ।‘को’रोना लागेपछि न घरकाले हेरे, न त आफन्तले नै ।
आफन्तको आ’सभरोसामा मष्टा गएँ, त्यहाँ पनि गाउँलेले झन्डै ढुं’गा हा’नेर मा’रेको । दुई दिनसम्म भोकै छु,’ आइसोलेसनमा रहेका कामीले भने ।घरमा कोही नभएका वृद्घलाई को’रोना लागेपछि गाउँघरमा समेत बस्न दिइएन । त्यसैले अहिले उनी गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन् ।
‘को’रोनाका कारण आफन्तको घर मष्टा गाउँपालिकामा गएका विकले खान र बस्न नपाएपछि भौँ’तारिरहेका थिए,’ तल्कोट गाउँपालिका स्वास्थ्य इन्चार्ज राजु विकले भने, ‘चिन्ताजनक अवस्थामा रहेका विकलाई हामीेले मोटरसाइकलमा लिएर आयौ र उपचार गराइरहेका छौँ ।’ दुई दिनसम्म भोकै भएकाले विकको र’क्तचाप एकदमै कम भएको र स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको उनले बताए ।
बझाङमा हालसम्म पजिटिभ रिपोर्ट आएका मानिस आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । जिल्ला अस्पताल बझाङमा पिसिआर र एन्टिजेनमार्फत कोरोना परीक्षण गरेका झन्डै ३० प्रतिशतमा रिपोर्ट पजिटिभ आउने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी नारायण जोशीले बताए
एक्स’नमा उत्रिए गृह’मन्त्री खगराज अधिकारी: ७७ वटै जिल्लामा १२ बुँदे परिपत्र पठाउँदै दिए निर्देशन, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)
आफ्नो नाम नभएपछि उपाध्यक्षले फुटाइदिइन् पुलको शिलालेख, मार्करले लेखिन् आफ्नो नाम
देशका यि यि स्थानमा ठूलो पानी,पर्ने अबको एक हप्ताभरि नै पानी पर्ने
तुलसीपुरमा अमिन माथि चलाइयो गो ली, गाउँलेको भागा-भाग
आखिर किन छि’मेकीहरू डराइ’रहेका छन् सबिताको स’पोर्ट लिन ? किन घरकै पक्ष’मा बोल्दै छन् ? (भिडियो सहित हे’र्नुहोस्)
UPDATE LINK by Everestthemes